wikietiquette [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/1/1180452132ba203b0e1888e244e69705.xhtml failed
Fanoratana amin'ny ankapobeny
Mikasika ny commentaire
Fanatsarana sy fandrindrana ny pejy (Refactoring)
Rehefa hanova pejy dia ireto misy toromarika tsara ho fantatra :
Ento milamina. Aza dia henjana be rehefa miteny na manohana
Aza maka sarotra fa zavatra tsotra sy mora azo soratana.
Aza fafana ny nataon’olon-kafa (raha tsy hoe fantatrao ny ataonao)
Aza mampiasa fanafohezan-teny loatra (raha tsy hoe misy pejy manazava azy eto amin’ny Wiki)
Hezahana mandrakariva ny hanazavana ny hevitra eo amin’ny pejy Wiki ihany mba hahamora ny fijerena azy (rehefa tsy azo hidivirina dia afaka mampiasa rohy ivelany)
Tandremo ny manao Dika/Petaka amin’ny zavatra voaaro any amin’ny sehatra hafa.Manaova zavatra mbola tsy misy dika mitovy aminy raha mety.
Hezahana mandrakariva ny fitsarana ny tsipelina mba hampirindra sy hahamora ny famakiana ny Wiki
Afaka tsy mitonona anarana ianao rehefa manoratra, nefa tsara raha asianao sonia kely ny zavatra nataonao raha mety. Ny Sonia fampiasa matetika dia toy izao ‘–’ otran’ny hoe: – FRAZ fa ny tena tsara raha tianao dia atao hoe – FanampinyAnarana (Afaka manamboatra pejy ho anao manokana milaza ny mombamomba anao ianao raha tianao.)
Eritrereto tsara vao manoratra. Ny WikiWiki dia tsy mitovy amin’ny chat. Mijanona maharitra ny zavatra soratanao eto.
Ataovy fohifohy nefa mahalaza ny zavatra tiana hambara. 5 mifanesy raha betsaka. Raha mety dia ataovy teny mifanesy fotsiny fa tsy asiana caracteres speciaux. Ohatra : Fanamboarana Pejy, Fitaovana Nampiasaina, Voambolana Malagasy . Atambatry ny praograma ho azy ireny avy eo ka lasa hoe FanamboaranaPejy, FitaovanaNampiasaina, VoambolanaMalagasy .
Hamarino tsara ny anaran’ny Wiki alohan’ny hanaovana azy. Raha sendra diso mantsy lasa sarotra ny manisy rohy amin’iny rehefa avy eo.
Ny fanatsarana sy fandrindrana ary famintinana ny pejy dia mahatsara ny Wiki. Ao anatin’izany ihany koa ny fanitsiana tsipelina. Aleo ataon’ny olona efa zatra tsara ny Wiki raha mbola tsy zatra ianao fa ireto anefa misy toromarika vitsivitsy
Mahaiza mamintina - fintino ny tsara sy ny ratsy aminy.
Tandremo ireo zavatra nataon’olon-kafa - aza ovaina ny zavatra tiany hambara.
Tsara raha atao somary mitovitovy ny endrika sy ny firafitry ny pejy Wiki rehetra. Jereo ohatra ny Pejy Modely
Mazotoa mandray anjara ary
wikietiquette.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43